Date My Pet » The Art Of Kutamba kworudo
kubudikidza Nick Boothman
Last updated: Jun. 03 2020 | 4 Maminitsi verenga
Kutamba kworudo kunopfuura chete kunakidzwa zviri inokosha. tipone yose ave rudzi kunobva kubatana kwevanhu. Kana takarega zvevakomana, anowira murudo, uye rinozvibereka taizorega kunonyangarikawo. Asi kunyange zvazvo zvisikwa Akatipa rusununguko vose zvakafanira nhengo tinofanira kuponesa isu kubva kutsakatika, kwete vose anoziva kuzvishandisa zvinobatsira avo zvakanakisisa. Izvi zvinonyanya kuitika panyaya zvevakomana.
Charlene, mumwe maneja huru zvipfeko cheni, uye Kira, mumwe physiotherapist, vanosvika chakakurumbira bhawa Galapagos mangwanani zvakakwana kuwana chokudya pakati chiito, vaine maonero guru nomuzariro uye kutamba pauriri. Pretty nokukurumidza mapoka vadzungaire uye nzvimbo chinozara. nevakadzi vari fashionably vakapfeka uye somunhu ndevenyu pano. Sezvo Charlene anotaura Kira, iye kutarira nenzvimbo uye fiddles nedzimwe anongoremberera tambo dzake nevhudzi. Ose maminitsi mashoma iye wiggles muviri wake uye, nguva nenguva, anoisa emaoko ake pamusoro patafura uye anoisa musoro wake ake, pouting uye kuita maziso panguva nhongo tarisiro panguva kubhawa. Charlene anofunga ari kuva seksikäs, asi iye haana. Iye ari kuita kuti vanhu vakawanda, vanhurume, kuita pavanenge pamusoro kunyangira: Ari dzinovhiringidza kuva seksikäs nekuva akanaka. Saizvozvo, zviito zvake chete ndimuite kutarisa kuchengeteka uye zvechihwana, Kupa kubvisa saibva simba.
funga, pane rimwe divi, anotarira chivimbo uye anoumbwa. Vazhinji nguva chaanogara chinyararire, musoro wake kutura nokusingaperi zvokuti zvishoma, uye anoteerera Charlene. nguva dziri kure, sezvo iye sips wake zvinobata, maziso ake achava nditarisise pamusoro magirazi uye iye zvauchasangana zvishoma nezvishoma kutora mukamuri. Saizvozvo, kana iwe nyatsotarisisai, Kira kunoita kushanda panguva hafu kumhanya Charlene. Anotarisa chivimbo uye rakachengeteka uye kupiwa kure vakura zvepabonde simba.
Zvino Kira akaita pfumbu Harvey, mukomana ichangopfuura akaona kupati asi haana zvakanaka akasangana. Akanga pedyo zvakakwana kuti manheru kuti overhear naye kutaura nechikepe vari Bahamas, uye akanga akafunga akanga anoyevedza uye kunakidza (Kira anoda chaienda). Zvino pano ane vaviri nedzimwe vakomana, akazendamira pamusoro pamatanda. Kira anoramba iye kwake peripheral zvakaratidzwa uye anomirira iye kutendeuka kwake divi.
Achangogara sezvaanoita, Kira sechinokosha matatu, zvikonzero pacharo, anosimuka kubva patafura, uye saunters kurutivi masitepisi kusvikira nhurikidzwa, adarika Harvey neshamwari dzake, muhudyu zvakavanda Kuzungunuka, achatungamirira zvishoma pasi. (Nei kutura musoro? Nekuti isu vanhu sokuti zvikuru AORORWA coyness pane brashness.) Ipapo meso Kira kuti kugadzira paari atambudzwe kukurumidza nguva kunyorerana. Rinomuona. Wechipiri iye anoziva Harvey ave akaona naye, anotsvaka kure coyly. Asi Harvey asati ane nguva sei, Kira glances paari zvakare, nguva ino kuvhara maziso ake nokusingaperi zvokuti zvishoma sezvo iye anopa kuchiratidza kunyemwerera. Harvey anowana shoko.
Vimbiso-ngavabude tarara mwoyo chaiwo kworudo. Zvinofanira akashandisa kusika asina kuzvironga.
Nezvauchangobva wakacherechedza ndiko masayendisiti kuzodana chipikirwa-ngavabude purogiramu pamusoro chikamu Kira uye asina kuzvironga norudaviro pamusoro chikamu Harvey. Kana totaura kodzero ndokuupfugamira, kusika mufaro nezvei makakatanwa uye kusunungurwa, kana uri kutaura pamusoro kutyisa mafirimu, chinotenderera Coasters, kana zvepabonde kwevanhu. Vimbiso-ngavabude nomuitiro Kira dzinoshandiswa Harvey ndiye mwoyo chaiwo kworudo. Zvinofanira kushandiswa varume nevakadzi kuti pave asina kuzvironga, uye rayo guru ndizvo chaizvo zvarinotaura zviri: kufunga, ipapo kuushandisa kure, ipapo aipa zvakare makakatanwa, rusununguko, makakatanwa; ziso kuonana, tarisa kure, ziso kuonana. Mumwe Kutarira hazvirevi chinhu, asi Kira sauntered nenzira tsamwisa nzira, akapa Harvey kechipiri Kutarira, uye Akanyemwerera musoro wake zvishoma kutura kureva coyness. Zvose izvi kunoratidza kuti hwechokwadi akufadza. Varume nevakadzi munyika yose kushandisa ichi inokosha purogiramu, tichifunga womukadzi saunter kana munhu swagger, achiperekedzwa ziso kuonana uye kunyemwerera, kuti chiratidzo uye vafarire mune mumwe munhu.
Saka Kira ave tacitly vakapa pepa nguva gare gare Harvey anopindura. Anouya masitepisi kuti muvharanda yaanogona kuona pachena Kira akatarisa pasi kutamba pauriri pazasi. Anotarira kwake ziso, kunyemwerera, uye anotanga pachake. “Another drink?” Harvey anobvunza.
“Ndatenda, asi . . .” Kira Anonyemwerera uye gwa, “Ndiri pano neshamwari uye tiri vachipemberera wake kusimudzirwa, saka chaizvoizvo Ndinofanira kudzokera kwaari.”
“tsime,” Harvey gwa, “Unogona kukoka ini kupemberera nemi. Saizvozvo, Ini vangafara kuti vandotenga Champagne. Zvakanaka nguva dzose kuti chikonzero chaicho kutenga bubbly.” He grins.
Kunyange zvazvo Kira anoziva kuti Charlene haana kumboita kana Harvey navo, anoti, “Ndizvo chaizvo norupo nemi, asi isu akavimbisa pachedu vasikana’ usiku kubva. Unoziva, kubata pasi pachako penhumbi.” Iye inongoda musoro wake, akatarisa kumusoro naye zvishoma, ipapo glances kure.
Harvey anobvunza, “Zvakadini mangwana ipapo iyoyowo, panzvimbo imwe chete, kana iyoyo, yakasiyana nzvimbo, kana . . . ?”
Kira vanoseka. “Ndine hurombo, Ini handisi kusununguka mangwana. Asi kana mukandipa nhamba yako, Ndicharipira imi pashure ini kutarira purogiramu yangu. Ndine chokwadi tinogona kuita chimwe chinhu pane imwe nguva.”
Chokwadi, Kira anoziva kuti Charlene haana hanya kana akapedza nguva yokuwedzera pamwe Harvey. Saizvozvowo, iye haana kuti anotevera usiku vakabatikana zvose iye vakaronga ndiro yokuwachira. Chii Kira ari kuita ndiko kushandisa kwose aiziva nheyo chishoma sorutivi wake kunyepedzera nzira.
The Principle pamusoro chishoma:
Sei Kuti Yourself More inonakidza
Kazhinji, vanhu vanoda zvakawanda havagoni kuva, saka nzira iri nyore kuwedzera desirability yako kana kutamba ari kushandisa nheyo chishoma. Pfungwa iri kupa pfungwa yokuti uri akakurumbira uye kudiwa.
Ehe, vanhu (uye kunyange nemakambani) kushandisa nzira iyi nguva dzose, asi maitiro kwedu ndizvo instinctual kuti isu usamborega kuwa nokuti. Semuyenzaniso, vose vanoziva kuti zviri akaipa zvakaoma kuwana ndishushikane panguva yakanakisisa mumaresitorendi, asi izvozvo handizvo hazvo nokuti vose matafura chaizvo wakawandirwa. Saizvozvowo, fashoni vagadziri dziri kunyanya chaizvo pamusoro apo mitsetse avo vari kutengeswa, uye avo yakakwirira mutengo Tags kushumira kuti asava vatengi vakawanda. kana redhiyo, terevhizheni, uye pirinda vanoshambadzira yokuti mashoko akafanana “Nepo zvinhu okupedzisira,” “Kungorara vaviri por mutengi,” “Limited chinyorwa,” uye “Bayirai zvakanaka chete kusvikira Sunday,” vari kushanda nheyo chishoma.
Ndichishanda musimboti chishoma
Sei kutora mukana musimboti rubatsiro urwu kuti munhu kuwira murudo newe? By upping kwako “ukoshi” mukutanga mumatanho ane ukama, kuita imi sokuti kushoma, anokosha, uye kukosha kutevera.
5 Zvinhu kuti Wingwoman Kuyeukwa
6 Zvinoenderana Nenguva Tips nokuti Kuroorana akangwara!
Chii Kuti Wear On A First Date By Zodiac Sign
5 Unique yechirimo Date Ideas
How To Ndipore Online Dating anorovera